xaanshiyaha TIG MIG MAG ELEKTRODE waxbarashada Waqti-waqti ah Antwerp
Waannu beeninnaa birta marka ay kulushahay
Alxanka iyo biibiilaha
Waxaad baranaysaa alxanka electrode, MIG MAG iyo TIG ee moduleka alxanka baaluqa. Waxaad baraneysaa sida loola shaqeeyo qalabka kala duwan ee alxanka iyo samaynta saxaro iyo tube. Waxaad baraneysaa inaad si sax ah u shaqeyso si aad uga hortagto khaladaadka cirifka iyo jahawareerka iyo inaad garatid noocyada kala duwan ee biraha sida birta, birta aan lahayn, birta ...
alxanka weel module The aad ku takhasusay hagaajinta dhammaan cilladaha suurto gal ah in weelasha. Tani waxay la isticmaalayo farsamooyin aad baratay alxanka biibiile module ah.
Waxaan ku bixinnaa tababarka alxanka ee labada habraac. Barashada labadaba waxay ka dhigan tahay inaad baranayso ganacsigaaga labadaba dugsiga iyo goobta shaqada. Waxaa sidoo kale lagu siin doonaa maalmaha shaqadaada. Markaad qalinjabiso, waxaad ku qancin kartaa loo-shaqeeyahaaga mustaqbalka waayo-aragnimada dhabta ah ee aad hore u leedahay.
Mawduucyada guud waxaad heleysaa isla maadada oo la mid ah waxa lagu baro waxbarasho xirfadeed oo waqti-buuxa ah laga soo bilaabo sanad dugsiyeedka 3e illaa iyo kuna jiro sanadka 7e. Waxa kale oo aad helaysaa koorsada Ingiriisiga.
Intaa waxaa dheer, waxaad ka qayb geli kara mashaariicda sida a-shirkadda mini, hay'adda dhacdada iyo ka badan!
Haddii aad dooneysid inaad billowdo ganacsi kuu gaar ah aad u baahan tahay shahaadada maamulka ganacsiga ah.
Waxaan bixinaa fursad ay ku helaan shahaadada this ee waxbarashada. Koorsadani waxay u soconaysaa muddo hal sano ah waxaana la siinayaa foomka shirkadda ardayga.
Adigoo wadajira dadka kale waxaad isku daydaa inaad ka dhigto shirkadda ardaygaaga mid faa iido leh oo waxaad baraneysaa dhamaan tabaha iibsiga iyo iibinta. Sidan ayaad si hubaal ah ugu ogaanaysaa dhamaadka geedi socodka in ganacsigu yahay wax adiga kuu gaar ah isla markaana aad haysato shandad adag oo aad ugu shaqeyso sidii qof iskaa u shaqeyste ah.
Waxaad jeceshay inaad la shaqeyso gacmahaaga
waxaad leedahay dareen ah biraha
waxaad si sax ah u shaqeysaa
Immisa sano ayaad tahay inaad tahay?
Waxaad u soo raaci kartaa dabcan ka sano 15 aad 25 sano.
Haddii aad tahay 15 sano waa in aad ugu yaraan ku 2 sano ee hore ee waxbarasho waqti-buuxa ah.
Haddii aad ka weyntahay 18 waa inaad u qalantaa shaqo lacag leh. Waa inaad si jidh ahaaneed u socotaa, waana inaad haysataa fasax inaad ka shaqeyso Belgium.
Weli qabto wax su'aalo ah?
Nala soo xiriir via website this ama telefoonka.
Mudo intee le'eg ayuu tababarku qaadanayaa?
Qaadida tababarka ayaa qaadata celcelis ahaan labo ilaa shan sano.
Waxaad ku bilowdaa modulka pijzen.
Iyada oo shahaado ah Pijplassen aad hore u xaqiijisatay booskeeda shaqo.
Haddii aad rabto inaad ku takhasusto, waxaad sii wadi kartaa inaad ka shaqeyso muraayadaha qashinka.
Qashinka waa xirfad khafiif ah, sidaas darteedna aad uga welwelsan suuqa shaqada.
Waa maxay aqoonta hore ee aad leedahay?
Waa inaadan laheyn aragti gaar ah oo ku saabsan koorsada Lassen. Gaar ahaan dareenka ah in la shaqeeyo biraha waa muhiim.
Haddii aad shaki ka qabtid in tababarku uu adiga kuu yahay, Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.
Waxaad had iyo jeer iman karo eegno!
Muxuu shaqokaaga u eg yahay?
Sida rugta waxaad inta badan ka shaqeysaa istuudiyaha laser oo aad ka shaqayn karto dhismooyin kala duwan, sida jaranjarooyinka, dhejiyeyaasha, albaabada, ... Waxaad ku biiri kartaa waaxda warshadaha ee aad ka shaqayn karto mashaariic kala duwan. Waxa kale oo aad u shaqeyn kartaa sidii ceelwaaqa dekedda halkaas oo weelkaaga laguu soo celin doono.
Waa maxay fursadahaaga shaqo?
Welder waa xirfad khafiif ah. Sidaas darteed waxaad si dhakhso ah u heli kartaa shaqo si aad u hesho dibloomo alxanka. Faa'iidada waxay tahay inaad horey u dhistay khibrad shaqo oo ku haboon Barashada + Shaqada. Tani waa faa'iido buuxda sababtoo ah loo-shaqeeyayaashu waxay raadinayaan tan.
Maanta ma fududa in la helo welwel xirfad leh. Taasi waa warka xun ee loo shaqeeyaha, laakiin waa war wanaagsan oo ku saabsan cidda ku biiri karta suuqa shaqadeeda.
Haddii aad si guul leh u dhameysatey koorsada tababarka alwaaxda leh, waxaad heli doontaa shahaadada aqoonta xirfadeed ee MIG / MAG ama TIG alxanka. Taas oo aad adigu si adag ugu riixdo suuqa shaqada.
Muxuu welwelku u qalmaa?
Ka dib markaad qalinjabiso, waxaad ku kasbataa celcelis ahaan 2140 euro guud ahaan wakhti buuxiye ah.
Miyaad sii wadi kartaa waxbarashada?
Caadi ahaan waxaad shaqeyn doontaa tababarka kaddib.
Hase yeeshe, shahaadada labaad waxaad ku bilaabi kartaa waxbarashada sare. Haddii aad wali rabto in aad sii barato, fadlan naga soo wargali CLB. Iyada oo ku xiran heerka shahaadada ardayga, waxaa jira waxyaabo la kala dooran karo: tusaale ahaan waxbarashada dadka waaweyn, VDAB, Syntra, ...
Tusaale ahaan, waxaad sii wadi kartaa qalinjabinta sawir-qaadaha, laydhka biyaha hoostiisa, biraha wax lagu qurxiyo, ...
Cilmi-gelinta wax-barashada wakhti-mar ah si faahfaahsan
Qaadista waa farsamo loogu talagalay qaybaha birta isku xira. Waxaa jira farsamooyin kala duwan ee alxanka.
Tig alwaaxda ayaa hadda la adeegsadaa farsamooyin badan oo la isticmaalo. Sidoo kale waa nooca ugu adag ee alxanka. In warshadaha, waxaad la shaqeyn kartaa Tig welders sababtoo ah waxaad gaadhay heerka ugu sarreeya ee saxda ah habkan alxanka.
Waxaan baraneynaa sida si madaxbannaan loogu shaqeynayo alxanka. Waxbarashada mushaharka ee waxbarashada wakhti dhiman waxaa ka mid ah labadaba dhinaca dambe, guntada caatada ah iyo xirmooyinka dhuunta.
Qalabka alwaaxda ah ee wax lagu barto ee loo yaqaan 'antwerp' - LASSEN mig magangelyo mashiinka ah
Barnaamijka The 'Wareer-Welding"wuxuu ka kooban yahay kuwa soo socda Module 3:
Waxaan kale oo aan ku baraynaa alxanka ku xiran electrode, oo leh qalab MIG-MAG ah; sidoo kale loo yaqaan mashiinka semi-automatic.
Muxuu tababarka alwaaxku sidoo kale ku lug leeyahay?
saldhig u ah aqoonta korantada iyo shaqada birta;
nabadgelyo leh oo la shaqeeynaya gawaarida;
Aqoon ballaaran oo ku saabsan habka xulashada gaarka ah ee alxanka kala duwan: TIG ama MIG / MAG ama alxanka tooska ah ee alxanka;
Waxaad ka shaqeyneysaa xawligaaga inta lagu jiro mudada koorsadaada.
Halkee baad tagtaa tababarka kadib?
Iyadoo caddaynta wareysiga waxaad ka jawaabeysaa baahida weyn ee suuqa shaqada;
Waxaad kaloo ku takhasusi kartaa farsamooyinka khaaska ah (alxanka cirifka, alxanka tooska ah ee alxanka ah ama Tig alxanka);
Waxaad xaq u leedahay shaqo ku socoto shirkad dhisme farsamo, saldhigga shidaalka, maraakiibta, qaybta baabuurta, ama shirkadda alxanka;
Waxaa jira dalab weyn oo loogu talagalay dadka wicitaanada wanaagsan (xirfad darran!). In Antwerp, waxaad tahay sida khayraadka xirfad leh, si aad u hubaal ah shaqo wanaagsan, oo si fiican u shaqeeya. Haddii aad haysato dareen ah alxanka oo aad jeclaan lahayd inaad hesho shahaadada dugsiga sare, tababarka hubaal waa wax adiga kugu habboon.
Barashada + si faahfaahsan u shaqeynaya
Barashada iyo shaqada aad taqaan magaca waxbarasho waqti dhiman.
Waxaad baran a ganacsiga ama xirfad shuqullo oo ay bartaan inay isu geeyo.
Sidaas daraaddeed adigu tag laba maalmood toddobaadkii dugsiga iyo shaqo tago muddo saddex maalmood ah.
Waxaad ka heli afar jeer sannadkii warbixin la natiijada labada qaab aad ee dugsiga iyo shaqada.
ah tababar xirfadeed aad barato xirfad iyo waxaad ka heli kartaa shahaadada aqoonta.
Intaa waxaa dheer in aad sidoo kale raaci kartaa hal maalin toddobaadkii koorsooyinka guud sida ku xusan manhajka waxbarashada xirfadda. Koorsooyinka guud waxaad ku qaadan kartaa shahaadada labaad, heerka saddexaad ama xataa kasban aad shahaadada dugsiga sare.
Barashada iyo shaqada waa nidaam u gaar ah.
Waxaan la dhibcood aan ninna shaqayn. Waxa kaliya ee aad la xukumi doonaa wixii aad awooddo.
Natiijooyinka maadooyinka guud (PAV) Your ma saamayn doonto natiijada maadooyinka la taaban karo.
Waxaan ka shaqaynaa qaybsan si aad u qalin karo sanadkan gudihiisa. Haddii aad gaari-karnimada oo dhan PAV badan aad u hesho shahaado ama shahaado.
Sidaa darteed ma awoodid inaad "fadhiiso" oo aad wax ka barato xawaarahaaga.
Ma jeclaan lahayd faahfaahin dheeraad ah? Nala soo xiriir adigoo adeegsanaya foomka ama telefoonka.
Waa maxay kharashka waxbarashada?
Waxaan ku dadaaleynaa in ay sii barnaamijyada sida raqiis ee suurtogalka ah.
Waxaad bixisaa khidmad dugsi oo go'an sanadkiiba. (Lacagtaas ayaa la dhimayaa haddii aad is diiwaangeliso kadib 1 March).
Intaa waxa dheer, waxaad bixineysaa oo kaliya lacagta aad u isticmaashid, suunka shaqadaada iyo kahor inta aadan ka bixin.
Qiimaha halkii koorsada aad bay u kala duwan yihiin.
The kharashka koorsada jaban € 185 sannadkii; € ku 350 ugu qaalisan.
Sidee ayaad u bixin kartaa?
Waxaad ka bixin kartaa lacagta caddaanka ah ee maamulka; waxaad ku wareejin kartaa qaddarka waxaadna bixin kartaa kaarka bangiga.
Uma baahnid inaad bixiso khidmadda dugsiga hal goor. Afar jeer sanadkiiba waxaad heleysaa koonto dugsi.
Maxay tahay inaad bixiso markaad is diiwaangeliso?
Markaad isdiiwaangelineyso, waxaan ku dallacnaa horayba euro-da 50.
Haddii aadan bixin karin midkaas hal mar, waxaad sidoo kale ku bixin kartaa qaybo kala duwan.
Nagala soo xiriir websaydh ama taleefan. Waxaad waliba markasta ku boodi kartaa saacadaha iskuulka.